ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ပျက်သွား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၀ ဦးတို့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့ရာမှာ ပျက်သွားခဲ့ ပါတယ်။
NLD ဘက်က ဖိတ်ကြားတာ ရက်ကပ်သွားတဲ့အတွက် မတက်ရောက်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ထား ပြီဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
"မအားလို့ပါ၊ သူတို့ကို မနက်က အကြောင်းတော့ ပြန်ပေးထားတယ်၊ ဖိတ်စာကလည်း နည်းနည်းလေးကပ်သွားတယ်လေ"
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေကို ထပ်မံဖိတ်ကြားမှာဖြစ်ကြောင်း ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
"ဘာဖြစ်လို့ဖိတ်လဲဆိုတာက ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေက ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ အချင်းချင်းပေါ့နော်၊ သူတို့အချင်းချင်းလည်း ခင်မင်တာတွေရှိတော့ ဖိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ကျမအနေနဲ့လည်း ဖိတ်ချင်တယ်၊ ဒါလည်းကောင်းတာပေါ့၊ လာနိုင်ရင်လည်းကောင်းတာပေါ့၊ ဖိတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင် ဖိတ်ပါဆိုပြီးတော့ ဖိတ်ထားပါတယ်၊ ကျမတို့က ထပ်ဖိတ်ဖို့လည်း ဘာမှဝန်မလေးပါဘူး"
တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၇၀ နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မနေ့က ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဖိတ်ကြားမှုဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ မကြာခဏတွေ့ဆုံမှုတွေ ရှိပါတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့ ISP
လွှတ်တော်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို "မင်းတို့ဘာမှ အပိုမပြောနဲ့ ပြောရင် စ လယ် ဆုံး ပြဿ နာ အားလုံး ရဲ့ အကျိုးဆက် တွေကို ကိုယ့် ဖာသာ ဖြေရှင်း" လို့
အစတည်းကမှာလိုက်ပြီးသား။ ဒါကြောင့် အဲဒီ စစ်ဗိုလ်တွေလည်းစိတ်ညစ်နေကြတယ်။
Nov 29, 2014 08:18 PM
စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ တွေ့ ဆုံဆွေနွေး လေ့မရှိပါဘူး။ ဗိုလ်နေဝင်း ဗိုလ်သန်းရွှေ တို့ ဟာ ဒေါ်စုကို သူတို့ ဖြစ်စေချင်တာ ပြောခြင်မှ ခေါ်တွေ့ တာ။ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုစစ် ဗိုလ်တွေ ကိုလဲ ဗိုလ်သန်းရွှေ က တွေ့ ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ မယုံရင်ကြည့်နေ ကြံဖန် အကြောင်းပြနေ လိမ့်မယ်။
I strongly agree to see NLD and military getting friendly because the future of Myanmar is in their hands. They can adjust how to move the future of Myanmar in democracy. Especially, Min Aung Hlaing and Suu Kyi should meet privately for the sake of 51 million people. Military should know that people in Myanmar mostly support NLD, and NLD also should also know that Military is so important for the change of Myanmar to democracy.
Nov 28, 2014 06:18 PM
အစတည်းက ထင်သားပဲ။ စစ်သား အားလုံးဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ လူတွေပဲ။ မတွေ့ ဆုံနိုင်ရင် ဘာဖြစ်လို့ လွှတ်တော်ထဲ ဝင်ထိုင်နေလဲ။
Nov 27, 2014 07:55 PM